Nosokirina ireo lakandrano tsentsin’ny fako • AoRaha
Nosokirina ireo lakandrano tsentsin’ny fako
Taorian’ny ora-mikija nampiandrona rano tamina faritra maro teto an-drenivohitra teo dia
nanapa-kevitra ny hisikotra an’ireo lakandrano tsentsin’ny fako ny teo anivon’ny fitantanana ny tanànan’Antananarivo renivohitra.
Isan’ny antony lehibe nahadibo-drano ny renivohitra izany fahatsentsenana izany. Hita nandritra ity fanadiovana ity fa ny fanariana ny fako anatin’ny lakandrano izay ataon’ireo mponina manodidina no tsy hahafahan’ny rano mikoriana tsara araka ny tokony ho izy. Manamafy izany ny fahanteran’ny fotodrafitrasa.
“Sahirana tokoa ireo mpiasan’ny Kaominina tamin’ny fanalana ireo fako an-taoniny maro ireo. Marihina fa na dia efa miezaka manao izay ho afany aza ny Kaominina Antananarivo renivohitra amin’ny fanaovana ny asany dia tsy ampy izany raha tsy mandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay amin’ny fanariana ny fako eny amin’ny toerana izay tokony hanariana azy amin’ny ora izay efa voatondro,” araka ny fitateram- baovao azo teo amin’ireo tompon’andraikitra avy eo anivon’ny kaominina Antananarivo renivohitra. Manentana ny rehetra izany izy ireo mba samy handray ny andraikitra tandrify azy.
Hoentina manalefaka ny mety hisian’ny tondra-drano eto an-drenivohitra izany. Na izany aza anefa dia nanambara ny avy eo anivon’ny Manamahefa miaro ny lemak’ Antananarivo amin’ny tondra-drano na ny Apipa fa “mbola tsy misy atahorana ny hisian’ny tondra-drano taorian’iny oram-be nikija ny alakamisy lasa
Fanalalahana arabe :: Hoesorina afaka 48 ora ireo fiara tsy mihetsika amoron-dalana
Fanitarana zotram-pitanterana :: Hanomboka hitatitra any Antsiranana sy Antsirabe ny kaoperativa Cotisse